ဘောလုံးနှစ်ပွဲ အတွေးတစ်ခု | FOX Sports Myanmar
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ . . .
ဘောလုံးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ဘောလုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခံစားချက်အားကြီးသူတွေဆိုရင် လုမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ “’ဒီနေ့ ဘောလုံးပွဲရှိတယ်” “Match day” စတဲ့ စာသားတွေကို တွေ့ကြမြင်ကြရမှာပါ။ ဒါတွေကို မြင်လိုက် တာနဲ့ မြန်မာအသင်း ဘောလုံးပွဲရှိတယ်ဆိုတာ သိသာနေပါပြီ။ ရှိတာမှ တစ်ပွဲထဲတောင်မဟုတ်ဘူး ၂ပွဲဖြစ်ပါတယ် AFF Next Media Cup ဆိုတဲ့ U-18 အသင်းရဲ့ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲနဲ့ UEFA ရဲ့ အကူအညီပါဝင်တဲ့4NATIONS U16 BOYS TOURNAMENT 2019 ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သင်းလုံးဟာ မြန်မာအလံကို ကိုယ်စားပြုပြီးကစားရမှာဖြစ်သလို ဒီနှစ်သင်းနဲ့ တွေ့မယ့် ပြိုင်ဖက်ကလည်း အင်ဒိုနီးရျားအလံကို ကိုယ်စားပြုမယ်ဆိုတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုကိုလည်းအားလုံးသတိထားရမှာပါ။
တကယ်တော့ မြန်မာအသင်းတွေအတွက် ဒီလိုတိုက်ဆိုင်တာက အပေါ်ယံတိုက်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အပိုင်းမှာ တော့ အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ အခြေအနေက မတူညီဘူးဆိုတာထက်တောင်ပိုပြီးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်း မှာတောင်ရှိနေတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ပွဲကြိုအခြေအနေကိုကြည့်လေ ယူ-၁၈ အသင်းက ကစားရတာက ဗီယက်နမ်မှာ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်။ ဒီပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းက အုပ်စုတက်ဖို့လုံလောက်တဲ့အမှတ်ကို စုဆောင်းပြီးသား ရှေ့က အုပ်စုပွဲစဉ်တွေအားလုံးကို အနိုင်ရထားတာကြောင့် ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးထွက်ပါစေ သူတို့လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ဆက်သွားခွင့်က လမ်းကြောင်းမှန်နေပြိးသား။ ယူ-၁၆ ကျတော့ ကိုယ်နိုင်ငံ ကိုယ့်ကွင်းဖြစ်တဲ့ မန္တလာသီရိမှာ။ အုပ်စုက အဖွင့်ပွဲစဉ်။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးချင်အချိန်က ယူ-၁၅ အနေနဲ့ အာဆီယံချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားကစားခဲ့ပြိး အရှုံးကြီးရှုံးလာခဲ့ရ တဲ့အသင်း၊ အဲဒီအသင်းကိုမှ စီမံမှုကောင်းကောင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားသားနည်းပြတွေကို ထုတ်ပြီး မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဟောင်း (ကို)မင်းသူကို လွန်ခဲ့တဲ့ (၇)ရက်ကမှ နည်းပြခန့်ခဲ့တာဆိုတော့ အထိုင်ကျဖို့မပြောနဲ့ နည်းပြလုပ်တဲ့သူတောင် ကစားသမားအားလုံး ကိုလူနဲ့နာမည်နဲ့ တွဲမိဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်။
အဲ . . .ပွဲပြီးတော့ လည်း ဒီနှစ်သင်းအတွက် ခံစားချက်က ဆန့်ကျင်ဘက်ဗျ။ ယူ-၁၈ အသင်းက အင်ဒိုကို သရေကျခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်ကအရင်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သလို ပွဲထွက်စာရင်းက အဓိက ကစားသမားတွေ အများကြီး အနားပေး ထားတာကြောင့် သရေကျလို့ အုပ်စုဒုတိယပဲရတယ်ဆိုပေမယ့် အမြတ်ထွက်တဲ့သဘောပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ ဟိုဖက်က ဘယ်အသင်းဖြစ်ဖြစ် ခြေစွမ်းအနေအထားက မတိမ်းမယိမ်းအခြေအနေတွေဆိုတာ တော်တော်များများက ကြည့်ထားသိထား ကြတယ်မဟုတ်လား။ ဘရူနိုင်းနဲ့နေ့က တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်ကစားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် ဒီနေ့ပွဲမှာ အဲဒီအမှားကို ပြင်ဖို့ကြိုးစားပြီး နည်းပြချပေးတဲ့ပုံစံအတိုင်း လိုက်ကစားခဲ့တာကလည်း နည်းပြတွေကိုရော ကစားသမား တွေကိုပါ အကြီးကြီးချီးကျူးရမယ့်အခြေအနေပါ။ ယူ-၁၆ ကျတော့ အခြေခံဘောလုံးကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းကစပြီး အဖက်ဖက်မှာအားနည်းချက်တွေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ ကွင်းလယ်က ဖရီးကစ်ကို ဂိုးထဲတိုက်ရိုက်ကန်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ စိတ်ကူးမျိုး၊ တွဲကစားရင် လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မယ့်အခြေအနေမျိုးမှာ နောက်တန်း(၃-၄) ယောက်ကြားထဲဆွဲဝင်ပြီးလိမ်ဖို့ကြိုးစား တာမျိုး၊ ကစားလို့နိမ့်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘောလုံးမကန်ဘဲ လူချည်းလိုက်ကန်နေတာမျိုး . . အားနည်းချက်တွေကို အသေးစိတ်ရေး ရရင် ဒီဆောင်းပါးက တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်စာအုပ်လောက်ဖြစ်သွားမယ်။ ပြည်သူပိုင်ရုပ်သံလိုင်းက ကြည်ကြည်လင်လင် ကြည့်ရတဲ့ပွဲဆို ဒီလိုချည်းပဲ . . .။
အဲဒီဘောလုံးပွဲနှစ်ပွဲကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုဝင်လာပါတယ်။ ဒီယူ-၁၈ ရော ယူ- ၁၆ရော အသင်းနှစ်သင်းလုံးက နောက်(၄-၅)နှစ်ဆိုရင် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာကြတော့မှာ။ ယူ-၁၈ ရော ယူ-၁၆ ရောက မြန်မာပြည်သူ သန်း(၅၀)ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုဖို့လုံလောက်ပြီလား။ နိုးပါ။ အပေါင်းလက္ခဏာ အများကြီးမြင်ရတဲ့ ယူ-၁၈ တောင်မှ မလုံလောက်သေးတာ ယူ-၁၆ ဆိုမပြောတော့ဘူးဗျာ။ ကောင်းပြီ မလုံလောက်ဘူးဆို ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ပြင်ကြရမှာ ပေါ့ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ ဒီထက်ပိုဆိုးလာမယ်လေ။ အဲပိုဆိုးလာမယ်ဆိုတာက ပြိုင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့အသင်း တွေအကုန်လုံးက သက်တမ်းလိုက်အသင်းတွေပြီးရင် အစဉ်လိုက်ဆက်တိုးတက်သွားကြတာ ကိုယ်တွေသာ ယူ-၂၃ ပြီးရင် တိုင်ပတ်နေတာဆိုတော့ ကိုယ်တွေလည်း တိုးတက်မယ့်လမ်းပေါ်ကိုတက်လိုက်မှရမယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေကတော့ ဘောလုံးကို အရူးအမူးအားပေးကြတဲ့ သူတွေပီပီ အရည်အသွေးကောင်းရင် ချီးမြှောက်ဂုဏ်ပြုဖို့ မနှေးကြသလို အရည်အသွေးမကောင်းရင် ထိုင်ဆဲနေဖို့လဲဝန်မလေးဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။ ဒီလိုအနေ အထားမှာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်လို့ ၀ိုင်းဝန်းမြှောက်စားရင် သွေးကြီးပြီး အရည်အသွေးက ရပ်တန့်သွားလို့မရသလို ဒီပွဲမှာ ရှုံးလို့ ဆဲနေတာ၊ အပြစ်တင်နေတာတွေကို နာကျင်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့လဲမရပါဘူး။ ဟုတ်တယ်လေ။ ငါ့ညီတို့အတွက် အချိန်ဆိုတာ အရမ်းတန်ဖိုးရှိနေပြီ (၄-၅) နှစ်ဆိုတာ ခဏလေးရယ်။ အဲဒီခဏလေးက မင်းတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု ကျဆုံးမှုကို အဖြေထုတ်ပေးမယ့် အချိန်ပဲ။ ဟုတ်တယ်အဲဒီအချိန်မှာ မင်းတို့က စီနီယာလက်ရွေးစင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ မင်းတို့အောင်မြင်မှု/ကျရှုံးမှု ဆိုတာက အဲဒီအချိန်ငါတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့် “မြန်မာ့ဘောလုံးအဆင့်အတန်းပဲ”။ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ အမြဲညံ့နေတယ်ဆိုတာ မရှိသလို အမြဲတော်နေတာလည်းမရှိဘူးညီလေးတို့ရေ အခုအချိန်မှာမင်းတို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်တယ်လို့ထင်ရင် ပိုတော်တဲ့ လူဖြစ်လာအောင်၊ ညံ့တယ်လို့ထင်ရင် တော်တဲ့လူဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးက မင်းတို့လက်ထဲမှာပါပဲ။ အခုအချိန်ဟာ နိုင်လို့ ဂုဏ်ယူကျေနပ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်သလို ရှုံးလို့ထိုင်ညစ်နေရမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ နိုင်တဲ့ပွဲမှာကောင်းတာတွေကို ဆက်ထိန်းသိမ်း ရှုံ့းတဲ့ပွဲတွေမှာ အားနည်းခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြင်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားကြဖို့လိုမယ်။ ဒါမင်းတို့ မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲညီလေးတို့ရေ . . .
ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေႛ . . .
ဘောလုံးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူ အထူးသူဖင့်ူမန်မာ့ဘောလုံးနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ခံစားခဵက်အားဋ္ဌကီးသူတေဆြိုရင် လုမကြန်ြယက်ပေၞမြာ “’ဒီနေႛ ဘောလုံးပြဲရြိတယ်” “Match day” စတဲ့ စာသားတေကြို တြေႚုကူမင်ုကရမြာပၝ။ ဒၝတေကြိုမင်လိုက် တာနဲႛူမန်မာအသင်း ဘောလုံးပြဲရြိတယ်ဆိုတာ သိသာနေပၝ္ဘပီ။ ရြိတာမြ တစ်ပြဲထဲတောင်မဟုတ်ဘူး ၂ပြဲူဖစ်ပၝတယ် AFF Next Media Cup ဆိုတဲ့ U-18 အသင်းရဲႚ အုပ်စုနောက်ဆုံးပြဲစဉ်တစ်ပြဲနဲႛ UEFA ရဲႚ အကူအညီပၝဝင်တဲ့4NATIONS U16 BOYS TOURNAMENT 2019 ပြဲစဉ်ူဖစ်ပၝတယ်။ိံစ်ြသင်းလုံးဟာူမန်မာအလံကို ကိုယ်စာူးပ္ဘြပီးကစားရမြာူဖစ်သလို ဒီိံစ်ြသင်းနဲႛ တြေႛမယ့်္ဘပိင်ြဖက်ကလည်း အင်ဒိုနီးရဵားအလံကို ကိုယ်စာူးပမြယ်ဆိုတဲ့ တိုက်ဆိုင်မကြိုလည်းအားလုံးသတိထားရမြာပၝ။
တကယ်တောူ့မန်မာအသင်းတေအြတကြ် ဒီလိုတိုက်ဆိုင်တာက အပေၞယံတိုက်ဆိုင်မပြဲူဖစ်ပၝတယ်။ ကဵန်တဲ့ အပိုင်းမြာ တော့ အသင်ိးံစ်ြသင်းရဲႚ အေူခအနေက မတူညီဘူးဆိုတာထက်တောင်ပ္ဘိုပီးဆန်ႛကဵင်ဘက်ူဖစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်း မြာတောင်ရြိနေတာပၝ။ ဟုတ်ပၝတယ် ပြဲဋ္ဌကိအြေူခအနေကိုကည့်လေ ယူ-၁၈ အသင်းက ကစားရတာက ဗီယက်နမ်မြာ အုပ်စုနောက်ဆုံးပြဲစဉ်။ ဒီပြဲစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းက အုပ်စုတက်ဖိုႛလုံလောက်တဲ့အမတ်ြကို စုဆောင်း္ဘပီးသား ရြေႚက အုပ်စုပြဲစဉ်တေအြားလုံးကို အိုိံင်ရထားတာေုကာင့် ဘယ်လိုရလဒ်မဵြိးထက်ြပၝစေ သူတိုႛလိုခဵင်တဲ့ရည်မနြ်းခဵက်ဆက်သြားခငြ့်က လမ်းေုကာင်းမန်ြန္ဘေပိးသား။ ယူ-၁၆ ကဵတော့ ကိုယ်ိုိံင်ငံ ကိုယ့်ကငြ်ူးဖစ်တဲ့ မိံ္ဈလာသီရိမြာ။ အုပ်စုက အဖငြ့်ပြဲစဉ်။ ဒၝပေမယ့် မုကာသေးခဵင်အခဵိန်က ယူ-၁၅ အနေနဲႛ အာဆီယံခဵန်ပီယံရစ်္ဘြပိင်ြပြဲကို ထိုင်ိးုိံင်ငံမြာသြားကစားခဲ့္ဘပိး အရြံးဋ္ဌကီးရြံးလာခဲ့ရ တဲ့အသင်း၊ အဲဒီအသင်းကိုမြ စီမံမကြောင်းကောင်းနဲႛိုိံင်ငူံခားသားနည်ူးပတေကြို ထုတ်္ဘပီူးမန်မာ့လက်ရြေးစင်ဟောင်း (ကို)မင်းသူကို လန်ြခဲ့တဲ့ (၇)ရက်ကမြ နည်ူးပခန်ႛခဲ့တာဆိုတော့ အထိုင်ကဵဖိုႛမေူပာနဲႛ နည်ူးပလုပ်တဲ့သူတောင် ကစားသမားအားလုံး ကိုလူနဲႛနာမည်နဲႛ တြဲမိဖိုႛတော်တော်ခက်ပၝတယ်။
အဲ . . .ပြ္ဘဲပီးတော့ လည်း ဒီိံစ်ြသင်းအတကြ် ခံစားခဵက်က ဆန်ႛကဵင်ဘက်ဗဵ။ ယူ-၁၈ အသင်းက အင်ဒိုကို သရေကဵခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်ကအရင်ဦးဆောင်ိုိံင်ခဲ့သလို ပြဲထက်ြစာရင်းက အဓိက ကစားသမားတြေ အမဵားဋ္ဌကီး အနားပေး ထားတာေုကာင့် သရေကဵလိုႛ အုပ်စုဒုတိယပဲရတယ်ဆိုပေမယ့် အူမတ်ထက်ြတဲ့သဘောပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ ဟိုဖက်က ဘယ်အသင်ူးဖစ်ူဖစ်ေူခစမြ်းအနေအထားက မတိမ်းမယိမ်းအေူခအနေတေဆြိုတာ တော်တော်မဵားမဵားကုကည့်ထားသိထာုးကတယ်မဟုတ်လား။ ဘရိူုိံင်းနဲႛနေႛက တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်ကစားတာေုကာင့် ပရိသတ်တေကြ မကေဵမနပ်ူဖစ်ခဲ့ရပေမယ့် ဒီနေႛပြဲမြာ အဲဒီအမြားကိုပင်ဖိုႛဋ္ဌကြိးစား္ဘပီး နည်ူးပခဵပေးတဲ့ပုံစံအတိုင်း လိုက်ကစားခဲ့တာကလည်း နည်ူးပတေကြိုရော ကစားသမား တေကြိုပၝ အဋ္ဌကီးဋ္ဌကီးခဵီးကဵြးရမယ့်အေူခအနေပၝ။ ယူ-၁၆ ကဵတော့ အေူခခံဘောလုံးကဵမြ်းကဵင်မအြပိုင်းကစ္ဘပီး အဖက်ဖက်မြာအားနည်းခဵက်တြေ အမဵားဋ္ဌကီးတြေႚရပၝတယ်။ ကငြ်းလယ်က ဖရီးကစ်ကို ဂိုးထဲတိုက်ရိုက်ကန်ဖိုႛဋ္ဌကြိးစားတဲ့ စိတ်ကူးမဵြိး၊ တြဲကစားရင် လယ်ြလယ်ြကူကူဖစ်မယ့်အေူခအနေမဵြိးမြာ နောက်တန်း(၃-၄) ယောက်ုကားထဲဆြဲဝင်္ဘပီးလိမ်ဖိုႛဋ္ဌကြိးစား တာမဵြိး၊ ကစားလိုႛနိမ့်လာတဲ့အခဵိန်မြာ ဘောလုံးမကန်ဘဲ လူခဵည်းလိုက်ကန်နေတာမဵြိး . . အားနည်းခဵက်တေကြို အသေးစိတ်ရေး ရရင် ဒီဆောင်းပၝးက တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပင်စာအုပ်လောက်ူဖစ်သြားမယ်။ူပည်သူပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကုကည်ုကည်လင်လင်ုကည့်ရတဲ့ပြဲဆို ဒီလိုခဵည်းပဲ . . .။
အဲဒီဘောလုံးပြဲိံစ်ြပြဲုကည့်္ဘပီးတဲ့အခဵိန်မြာ ခေၝင်းထဲမြာအတြေးတစ်ခုဝင်လာပၝတယ်။ ဒီယူ-၁၈ ရော ယူ- ၁၆ရော အသင်ိးံစ်ြသင်းလုံးက နောက်(၄-၅)ိံစ်ြဆိုရင်ူမန်မာ့လက်ရြေးစင်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာုကတော့မြာ။ ယူ-၁၈ ရော ယူ-၁၆ ရောကူမန်မာူပည်သူ သန်း(၅၀)ကေဵာ်ကို ကိုယ်စာူးပဖြိုႛလုံလောက်္ဘပီလား။ိုိံးပၝ။ အပေၝင်းလက္ခဏာ အမဵားဋ္ဌကီူးမင်ရတဲ့ ယူ-၁၈ တောင်မြ မလုံလောက်သေးတာ ယူ-၁၆ ဆိုမေူပာတော့ဘူးဗဵာ။ ကောင်း္ဘပီ မလုံလောက်ဘူးဆို ဘာလုပ်ုကမလဲ။ူပင်ုကရမြာ ပေၝ့ဒီအတိုင်းဆက်သြားရင်တော့ ဒီထက်ပိုဆိုးလာမယ်လေ။ အဲပိုဆိုးလာမယ်ဆိုတာက္ဘပိုင်ဖက်တြေူဖစ်တဲ့အသင်း တေအြကုန်လုံးက သက်တမ်းလိုက်အသင်းတ္ဘြေပီးရင် အစဉ်လိုက်ဆက်တိုးတက်သြာုးကတာ ကိုယ်တေသြာ ယူ-၂၃္ဘပီးရင် တိုင်ပတ်နေတာဆိုတော့ ကိုယ်တေလြည်း တိုးတက်မယ့်လမ်းပေၞကိုတက်လိုက်မရြမယ်။
ူမန်မာူပည်သူတေကြတော့ ဘောလုံးကို အရူးအမူးအားပေုးကတဲ့ သူတေပြီပီ အရည်အသြေးကောင်းရင် ခဵီးေူမြာက်ဂုဏ်ူပဖြိုႛ မြေိံုးကသလို အရည်အသြေးမကောင်းရင် ထိုင်ဆဲနေဖိုႛလဲဝန်မလေးဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိပၝ။ ဒီလိုအနေ အထားမြာ ဒ္ဘီပိင်ြပြဲမြာအောင်ူမင်လိုႛ ဝိုင်းဝန်းေူမြာက်စားရင် သြေးဋ္ဌကီး္ဘပီး အရည်အသြေးက ရပ်တန်ႛသြားလိုႛမရသလို ဒီပြဲမြာ ရြံးလိုႛ ဆဲနေတာ၊ အူပစ်တင်နေတာတေကြို နာကဵင်္ဘပီး စိတ်ဓာတ်ကဵနေလိုႛလဲမရပၝဘူး။ ဟုတ်တယ်လေ။ ငၝ့ညီတိုႛအတကြ် အခဵိန်ဆိုတာ အရမ်းတန်ဖိုးရြိန္ဘေပီ (၄-၅)ိံစ်ြဆိုတာ ခဏလေးရယ်။ အဲဒီခဏလေးက မင်းတိုႛရဲႚ အောင်ူမင်မြ ကဵဆုံးမကြို အေူဖထုတ်ပေးမယ့် အခဵိန်ပဲ။ ဟုတ်တယ်အဲဒီအခဵိန်မြာ မင်းတိုႛက စီနီယာလက်ရြေးစင်ူဖစ်န္ဘေပီဆိုတော့ မင်းတိုႛအောင်ူမင်မြ/ကဵရြံးမြ ဆိုတာက အဲဒီအခဵိန်ငၝတိုႛရင်ဆိုင်ရမယ့် “ူမန်မာ့ဘောလုံးအဆင့်အတန်းပဲ”။ ဒီကမ္တာဋ္ဌကီးမြာ လူတစ်ယောက်ဟာ အ္ဘမဲညံ့နေတယ်ဆိုတာ မရြိသလို အ္ဘမဲတော်နေတာလည်းမရြိဘူးညီလေးတိုႛရေ အခုအခဵိန်မြာမင်းတိုႛက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်တယ်လိုႛထင်ရင် ပိုတော်တဲ့ လူဖစ်လာအောင်၊ ညံႛတယ်လိုႛထင်ရင် တော်တဲ့လူဖစ်လာအောင် ဋ္ဌကြိးစားဖိုႛအခငြ့်အရေးတေအြားလုံးက မင်းတိုႛလက်ထဲမြာပၝပဲ။ အခုအခဵိန်ဟိာုိံင်လိုႛ ဂုဏ်ယူကေဵနပ်နေရမယ့်အခဵိန်မဟုတ်သလို ရြံးလိုႛထိုင်ညစ်နေရမယ့်အခဵိန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ိုိံင်တဲ့ပြဲမြာကောင်းတာတေကြို ဆက်ထိန်းသိမ်း ရြံ့းတဲ့ပြဲတေမြာ အားနည်းခဲ့တာတေကြိုပန်ူပင်္ဘပီး ရြေႚဆက်သြာုးကဖိုႛလိုမယ်။ ဒၝမင်းတိုႛ မူဖစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲညီလေးတိုႛရေ . . .
Home Football Team Myanmar ဘောလုံးနှစ်ပွဲ အတွေးတစ်ခု